Yekupedzisira YekuEurope Chitima Rwendo Kune Vakatanga | Save A Train
musha > Travel Europe > Yekupedzisira YekuEurope Chitima Rwendo Kune Vakatanga
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 05/12/2020)
Chero munhu pano anobva kunze kweEurope? Simudza ruoko rwako kana uri sezvo akavhiringidzwa pachena dzaifanoiswa seni. chokwadi, New York ine nzira yepasi pevhu, uye Toronto inomhanya metro, asi nezvakakura, nyika inobudirira pamotokari. Saka pose tinoona pachedu kuita hop mhiri dziva kuti chinoshamisira French baguette, zvinhu zvinogona awane chiduku vachikurirwa. Izvi ndezvechokwadi kunyanya nokuda vomuzana timers, uyo kazhinji vasina pfungwa chaizvo kushandisa kwavo rwendo Europe nechitima, ndoda apo vanofanira kufamba.
Kunyangwe iwo mutsauko pakati peEurostar ne TGV Chitima network (Tkunaya a Gmupendero Vitesse) kana kuyedza kufamba zvigaro zvekugara uye kudeketera kwepamberi, zvinogona zvose kuva zvishoma zvikuru. Nokuti avo sezvarasika sezvandiri, taona vakaungana yakanakisisa avaiita kukupai Ultimate Europe Trip nechitima kuti Beginners.
Rail Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, Iwo Akachipa ezvitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Europe Chitima Rwendo Kune Vanotanga Mira 1: London
Pane zvikonzero ratiri wakasarudzwa London sezvo wokutanga chemabhazi parwendo urwu, asi kwose izvozvo chete inoita zvikuru pfungwa. From North America Vols kuLondon vane kakawanda uye zvakachipa, zvinoreva kuti unenge uchichengetedza imwe mari yakakomba pamusoro pekubhururuka muFrankfurt kana mamwe mahabhu eEurope.
London ndiye nomusimboti chikuru uye uchava hapana dambudziko kuwana zvinhu kuita. Kana iwe uri Harry Potter fan, guta riri dzakazara bhuku uye firimu magwaro. Kana iwe uri mumitambo yemitambo, Soho kumusha kune yakakura mu Broadway varaidzo, uye iwe unogona kazhinji kuwana matikiti ari dhisikaundi.
nyore unogona kupedza mavhiki pano pasina uchimhanya mabasa, asi nepashoma, tinokurudzira mazuva mana. Kamwe wagadzirira mberi, inguva musoro wako inotevera rwendo.
Chitima Mira 2: Paris
Iwe haugone kurova Europe pasina kushandisa nguva mairi zverudo zvakanyanya guta. The City wemwenje kunokosha-chemabhazi, kana yako yokutanga kana kwenyu chegumi kushanya, uye luckily vafambi, ari Eurostar chitima Anomhanyira anenge ose awa kubva kuLondon kuti Paris. Rwendo anotora pfuurei 2 maawa uye matiketi echitima anogona kugoverwa kuitira isingadhuri pamberi.
Tinokurudzira kupedzera mazuva anenge mana pano uyewo, asi kana yako nguva yekuzorora ishoma iwe unogona kuinyudza pasi kusvika maviri.
Europe Chitima Rwendo Kune Vanotanga Mira 3: Barcelona
Kunyange zvazvo ichi chaitevera iri chaizvo rwendo nechitima, unogona kushandisa rimwe akarara motokari kuwana yako snooze usati wasvika muguta iri remahombekombe. Tora chinzvimbo chakakomberedza Gothic Quarter uye unakirwe nezvimwe chokoreti-yakanyudzwa churros usati waenda Parc Guell.
Chimwe chezvikamu zvakanaka zveBarcelona ndechekuti Spain yakachipa zvakanyanya kana ichienzaniswa nevayo vavakidzani vekuchamhembe, saka iwe uchawana yakawanda yako mari pano. Tinokurudzira kugara mazuva dzinenge mbiri pano kuongorora guta.
Famous ayo Boardwalk uye pedyo chaizvo Cannes, Nice Ville yakanyatsokodzera kumiswa parwendo rwako rwechitima rweEurope. Nepo guta pachayo haina kwakaenzana romuFrance guta, ayo nzvimbo iri pedyo akawanda vakakodzera nzendo zuva. Chekutanga, musoro Monaco uye Kurasa madhora mashanu panguva kasino. Nakidzwa chinoshamisira motokari uye kutevera fomura 1 nzira panyika yakakurumbira rudzi njanji. Next, tora chitima kuCannes – kana uri ikoko pamutambo kuchengeta ziso nokuda vakakurumbira zvikuru!
Tinokurudzira anokwana mazuva mana pano kuti gadzira nzvimbo dzese idzo nzendo dzezuva.
Europe Chitima Rwendo Kune Vanotanga Mira 5: Rome
Guta guru Italian mutambo meso. Kubva Spanish Steps kuna Trevi Fountain, hapana kwese kwaungazopeputswa na mukare akitekicha. Kana kuti zvakanga zvisina kukwana, zvokudya ndewe slavering pamusoro. Handmade Pasta vies ne matsva gelato uye nyati mozzarella yasvika ngaatarire kubva papurazi.
Chokwadi hapana chakawandisa nguva yekushandisa muRoma, asi kana iwe unofanira kusiya kuti pashure kushoma mazuva mashanu.
Ndingadai usimbe kana ndisina kutaura Venice uchiri rwokutanga. Kunyange ndakanga ndisina yakanakisisa ruzivo (vashanyi vakawanda), guta rino kunokosha-do. Pakati pegondolas uye zvikepe zveveruzhinji, iwe uchatsvaga nzira yako kuyambuka kwechero kune mamwe masayiti erudo muEurope.
tinoratidza vachipedza mazuva maviri vari muVenice usati wasvetukira chitima uchienda kwaunoda kuenda.
Europe Chitima Rwendo Kune Vanotanga Mira 7: Vienna
Pano tiri kusiya vakawanda akafamba nzira uye kuenda zvishoma panzira. Zviri yakanaka chikonzero, Zvisinei, sezvo zvakawanda centrally-iri nyika dzokuEurope hazvifaniri kurerutswa. Ava vane yeshoko uye flair kumavirira nevamwe unoshamisa misiyano. In Vienna, izvi zvinoreva kutsamwa kofi tsika uye matombo-pasi mitengo. Chiizve Unoda?
Tinoratidza mazuva dzinenge mbiri Vienna vasati ichifamba.
Iri guta ramakore ane chiuru rinozivikanwa neguta rakare. Paunoshanya, usakanganwa kumbomira Astronomical Clock vasati vakananga kuona Infant naJesu. Kana uchida munhau, vechiJudha cram ekare achiri unobereka mavanga akamanikidzwa inhabitation. Nepo mazuvano nzvimbo yave kunatsiridzwa zvikuru, unogona achiri kushanyira ayo nhanhatu mumasinagogi.
Tinokurudzira kugara muPrague kweanenge mazuva matatu kuti uongorore guta.
Nuremberg kune Prague matikiti
Munich kuenda kuPrague matiketi
Berlin kuenda kuPrague matiketi
Vienna kuenda kuPrague matiketi
Europe Chitima Rwendo Kune Vanotanga Mira 9: Berlin
A resungano kuti kuberekwazve, Berlin nhasi ndiyo nomusimboti hudyu tsika German. Kunyangwe iwe uri kuyedza kushanyira hipster bar kana art museum yakazonyorwa wakanaka yokudyira resitorendi, Berlin ndiko uchida kuva. Kune mitoro zvinhu kuita pano, kusanganisira kushanya kune vakasara Wall Berlin. Ehe saizvozvo, pane zvose zvetsika mamiziyamu namaberere uyewo.
Tinoratidza mazuva kanenge matatu pano kunakidzwa Berlin zvose ane pfupiro.
Leipzig kuenda Berlin matiketi
Unofanira kuona migero muna Venice, asi hapana anogona kugadzirira akashambidzika, guta yakarongeka Amsterdam. The Dutch guta musha zvikepe bikes pane motokari, uye iwe unogona nyore kupedza nguva yako yose pano gawping panguva mapurani.
Tinokurudzira iwe famba kuenda kuAmsterdam Kwemazuva matatu pano zvakare, mungadai kunyange kuita nani ina kana shanu.
Hezvo nayo. Kubva London kuna Amsterdam uye kwose kwose pakati, ichi ndicho chakanakisisa kutungamirira European chitima rwendo beginners. muAmsterdam, wakasununguka kudzokera kuLondon nekushandisa Save A Train, kana musoro musha kodzero kubva Netherlands.
Unoda embed yedu Blog romukova “Yekupedzisira YekuEurope Chitima Rwendo Kune Vakatanga” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva es kuti fr kana tr uye nemitauro yakawanda yesarudzo yako.
Masikati TrainJourny TrainsInEurope TravelForBeginners TripForBeginners TripsInEurope